Google iri kugadzira fomati nyowani yemufananidzo WebP 2 | Linux Vakapindwa muropa
Google yakaburitsa mabasa ane hukama ne chimiro chitsva chekuyedza encoding fomati inonzi "WebP 2", iri kukura se kutsiva kwakanyanyisa kweWebhu fomati.
Sezvo iyo fomati nyowani ichiri mukuvandudza uye haina kuzotsanangurwa pakupedzisira, saka haisati yagadzirira kushandiswa kwakawanda (Kuenderana kumashure hakuna kuvimbiswa pane encoder uye decoder, kodhi haina kugadziridzwa.)
Nezve WebP 2
En WebP 2 tsanangura maficha matsva ekushandisa kwako, senge HDR ine 10-bit color inomiririra, kunyatsoshanda kumanikidza kweruzivo pachena, kutsigirwa kwakazara kweanoratidzira, nyore kuwedzera kukamura (dura-ne-daro dhizaini neruzivo rukuru padanho rega rega, zvichikubvumidza iwe kuti ugadzire zvigunwe nekukurumidza kwazvo kuti utarise), nekukasira yakawanda-yakapetwa software kuitisa, kudzikisira kwekuona kwakaderera pamitengo yakaderera yemabiti, yakavandudzwa isina kurasikirwa compression modhi.
WebP 2 ndiye anotsiva iyo WebP fomati fomati, parizvino mukuvandudza. Iyo haina kugadzirira kushandiswa kwakawanda uye fomati haina kupedzwa, saka shanduko kuraibhurari dzinogona kutyora rutsigiro rwemifananidzo yakadzoserwa-kumashure.
Iyi pasuru ine raibhurari iyo inogona kushandiswa mune mamwe mapurogiramu kukodhi kana kusarudza Webp 2 mifananidzo, pamwe nemirairo yetambo maturusi.
Chinangwa chemafomati matsva akafanana neiyo yekutanga WebP: kutapurirana kwemifananidzo pamusoro pemambure, optimization yepakati resolution, shandisa muwebhu uye nharembozha, nerutsigiro rwemabasa akajairika emabasa aya, senge rutsigiro rwekujeka, mifananidzo uye nekukurumidza masiketi.
Iyo yekuyedza WebP 2 codec inonyanya kufambisa WebP maficha maererano nekomputa kushanda. Zvitsva zvitsva (senge 10b HDR rutsigiro) zvinochengeterwa padiki. Matemo ekuyedza ndeaya:
Yakawanda inoshanda kurasikirwa kwekumanikidza (~ 30% zvirinani pane WebP, padhuze neAVIF sezvinobvira)
Zvirinani kuoneka kudzikira pazasi yakadzika bitrate
Yakagadziriswa isina kurasikirwa compression
Yakagadziriswa kujekesa kudzvinyirira
Chiedza chinowedzera kududzira
Chidiki chepamusoro mudziyo, wakanyatsogadzirirwa Dhizaini Dhinda
Yakazara 10-bit kuvaka (HDR10)
Yakasimba yekutarisisa software kuitisa, yakazara yakazara kuverenga
Mhosva dzekushandisa dzinoramba dzakangofanana neWebP: wired kuchinjisa, inokurumidza webhu, zvidiki mashandisirwo, zvirinani mushandisi ruzivo… WebP 2 inonyanya kukodzera zvakajairika zvemukati zviripo pawebhu uye nhare mafomu: renji zviyero zviri pakati, pachena, mafupi maficha, zvigunwe.
Iko kuedza kukuru mukugadzirwa kweiyo fomati nyowani chinangwa chekuwedzera kudzvanya kushanda.
Kutanga WebP inozadzisa kudzikisa saizi faira kubva pa25% kusvika 34% uchienzaniswa neJPEG mafaera ehunhu hwakafanana, uye mune isina kurasikirwa compression modhi, inowana kudzikira kwe26% muhukuru hwefaira hunofananidzwa nehuremu hwekumanikidza hwePNG. WebP 2 inovavarira kuwana kuvandudzwa kunyatsoshanda 30% kurasikirwa kwekumanikidza uchienzaniswa neyekutanga WebP uye unounza iyo AVIF yekurasikirwa nekomputa codec kusvika 20%
Iyo prototype iri pasi peyedzo ichiri isina kunyatsogadziriswa uye inowira kure kuseri kwekumisikidzwa kuitiswa kwewebwebp maererano nekodhi uye kududzira kumhanya. Semuenzaniso, mukurasikirwa nemhando yekumanikidza, WebP 2 inodzvanya zvakapetwa kashanu zvishoma pane yekutanga WebP.
Kuenzaniswa ne libavif, iyo itsva WebP fomati chii chiri kusimukira Google encode kaviri nekukurumidza, asi inosara katatu mukumhanyisa kumhanya. Panguva imwecheteyo, nenguva iyo iyo yekupedzisira vhezheni ye libwebp3 raibhurari painosunungurwa, zvakarongerwa kuwana parity mukumisikidza kumhanya.
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezve iyo noti, vanogona kutarisa iro rekutanga bhuku Mune inotevera chinongedzo.
Uye kune avo vanofarira kuziva kodhi yeprojekti, pamwe nekufambira mberi kwayo, vanogona kuitarisa nekuenda kul chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Google iri kugadzira itsva WebP 2 mufananidzo fomati